अदालतको यो निर्णयले पूर्वगृहमन्त्री ‘बादल’ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र जे'ल जान सक्ने !
अदालतको यो निर्णयले पूर्वगृहमन्त्री ‘बादल’ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र जे’ल जान सक्ने !
काठमाडौं । प्रहरीले दुई वर्षदेखि दबाएर राखेको कुमार पौडेल ह -त्याको घटना अदालतले ब्युँताइदिएको छ। जसमा तत्कालीन गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुख समेतलाई सजाय हुन सक्नेछ।
२०७६ असार ५ गते प्रहरीको गो’लीबाट मारिएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलका परिवारको जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
‘अदालतको आदेशसँगै सात दिनभित्रमा जाहेरी दर्ता हुन्छ। जाहेरी दर्ता भइसकेपछि ज्यान मु’द्दामा अनुसन्धान गरेर दोषीलाई मु’द्दा चलाउनु पर्ने हो,’ अर्यालले भने, ‘त्यहाँसम्म पुग्लान् भन्ने लागेको छैन। अब अनुसन्धानलाई छल्ने उपाय अपनाउन खोज्छन्। हामी निरन्तर फलोअप गरेर दोषीलाई जोगाउन दिँदैनौँ।’
जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल पनि जोडिएका छन्। रिटमा उनीहरुलाई विपक्षी नबनाइएको भए पनि उनीहरुको निर्देशनमा पौडेलको हत्या भएको परिवारको दाबी छ। पौडेलको लालबन्दी नगरपालिका १ स्थित लखन्देही जंगल नजिक पर्ने हिरापुरतर्फ जाने कच्ची सडकको बाँसघारी मुनि २०७६ असार ५ गते दिउँसो ह -त्या भएको थियो।
२०७६ माघ २३ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत परिवारले जानकारी गराएको थियो।
घ’ट;नाको हालसम्म सत्य तथ्य अनुसन्धान नभएको र किटानी जाहेरी पेस गरे पनि अनुसन्धानको प्रक्रियाबारे केही जानकारी नदिएको भन्दै पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले निवेदन दिएकी थिइन्। वकिल कार्यालयमा निवेदन दिएपछि पनि का’र’बाही अगाडि नबढेपछि दुर्गादेवीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन्।